Tantaran'i Mefi-Boschets - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2021-01 > Tantaran'ny Mefi-Boschets
Ny tantaran'i Mefi-Boschets
Ny tantara iray ao amin'ny Testamenta Taloha dia nahaliana ahy manokana. Ilay mpilalao sarimihetsika lehibe dia antsoina hoe Mefi-Boscheth. Ny vahoaka israelianina dia miady amin'ny Filistina fahavalony lehibe indrindra. Nandritra io toe-javatra manokana io dia resy izy ireo. Maty i Saoly Mpanjakan'izy ireo sy Jonatana zanany. Tonga hatrany Jerosalema renivohitra ny vaovao. Raikitra ny fikorontanana sy ny korontana ao an-dapa satria fantatra fa raha maty ny mpanjaka dia azo vonoina ihany koa ny fianakaviany mba hiantohana fa tsy hisy ny fikomiana amin'ny ho avy. Izany no nitranga fa tamin'ny fotoana nisian'ny korontana ankapobeny, ny mpitsabo mpanampy an'i Mefi-Boscheth, dimy taona, dia nitondra azy ary nandositra avy tao an-dapa. Tao anatin'ny fikoropahana nisesisesy tao amin'ilay toerana no namelany azy hianjera. Nanjary nalemy nandritra ny androm-piainany izy.
Ary Jonatana, zanakalahin'i Saoly, nanan-janakalahy malemy tongotra roa; fa efa dimy taona izy, raha tonga tany Jezirela ny tenin'i Saoly sy Jonatana, ary nalain'ny mpitaiza azy izy ka lasa nandositra; ary raha nandositra haingana izy, dia nianjera ka nalemy hatrany. Mefi-Boscheth no anarany » (2 Sam 4,4).
Tsarovy fa mpanjaka izy ary ny iray andro talohan'izay, toy ny zazalahy dimy taona dia nandeha nitety ny lapa tsy nisy ahiahy izy. Saingy tamin'ity andro ity dia niova tampoka ny fiainany manontolo. Novonoina ny rainy sy ny raibeny. Izy tenany no nilatsaka ary nandritra ny androny sisa dia nalemy ary niankina tamin'ny fanampiana avy amin'ny olon-kafa. Miaraka amin'ny fanaintainany izy dia honina amin'ny toerana manjavoana sy mitokana mandritra ny 20 taona ho avy. Ity no tantara an-tsehatra Mefi-Boscheth.
Inona no ifandraisan'ny tantaran'i Mefi-Boscheth amiko sy aminao? Toa azy, kilemaina kokoa noho ny eritreretintsika isika. Mety tsy ho nalemy ny tongotrao, fa ny sainao kosa. Mety tsy ho tapaka ny tongotrao, fa, araka ny lazain'ny Baiboly, ny toe-panahinao. Rehefa niresaka ny toe-piainanay mafy i Paoly, dia lasa tsy nalemy fotsiny izy: "ianareo koa dia efa maty tamin'ny fandikan-dalàna sy ny ota" (Efesiana 2,1). Nilaza i Paul fa tsy afa-manoatra izahay raha afaka manamarina an'io, mino na tsia. Milaza ny Baiboly fa raha tsy mifandray akaiky amin'i Jesosy Kristy ianao dia maty ny olona iray ara-panahy.
«Fa Kristy maty ho an'ny ratsy fanahy ho an'ny ota na dia malemy aza. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa maty hamonjy antsika Kristy fony mbola mpanota isika » (Romana 5,6: 8 sy).
Tsy misy na inona na inona azonao atao hamahana ilay olana. Tsy manampy ny fiezahana mafy kokoa na hihatsara. Kilemaina tanteraka izahay, mihoatra ny eritreretintsika. Ny drafitr'i David Mpanjaka, zazalahy mpiandry ondry izay niandry ny ondriny, dia eo amin'ny seza fiandrianan'ny Isiraely amin'ny andro any Jerosalema. Izy no sakaizan'i Jonatan akaiky indrindra, rain'i Mefi-Boscheth. Tsy nanaiky ny seza fiandrianana fotsiny i David fa nahazo ny fon'ny vahoaka koa. Nanitatra ny fanjakana tamin'ny 15.500 km2 ka hatramin'ny 155.000 km2 izy. Niaina tamim-pilaminana ny vahoaka Isiraely, tsara ny toekarena, ary be ny vola miditra amin'ny hetra. Tsy tokony ho nihatsara ny fiainana.
Heveriko fa nifoha maraina be i David noho ny olona rehetra tao an-dapa. Mandeha moramora mankany an-tokotany izy ary mamela ny eritreriny hivezivezy amin'ny rivotra mangatsiaka maraina alohan'ny hieritreretan'ny tsindry ny andro. Ny eritreriny dia miverina amin'ny fotoana nandaniany ora maro niaraka tamin'i Jonathan sakaizany tsy mivadika, izay tsy hitany hatry ny ela satria novonoina tamin'ny ady. Avy eo dia tadidin'i David avy tany amin'ny lanitra manga ny resaka nifanaovany. Tamin'izany fotoana izany dia tototry ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahasoavany i David. Satria tsy nisy izany raha tsy teo i Jonathan. Tadidiny ny resaka nifanaovan'izy ireo rehefa nifanaovana fifanarahana izy ireo. Tao anatin'izy ireo dia nifanome toky izy ireo fa ny tsirairay amin'izy ireo dia tokony hikarakara ny fianakaviany avy, na aiza na aiza no mety hitarika azy ireo amin'ny dia lavitra. Ary tamin'izany fotoana izany dia niverina Davida ka niverina tany an-tranony ary nanao hoe: Mbola misy sisa ihany va ny tamingan'i Saoly hasiako famindram-po noho ny amin'i Jonatana? (2 Sam 9,1). Fa mpanompo avy tany an-tranon'i Saola Ziba no anarany, ka nantsoina tany amin'i Davida izy. Ary hoy Ziba tamin'ny mpanjaka: Mbola misy zanakalahin'i Jonatana, mandringa tongotra izy. (2 Sam 9,3).
Tsy manontany i David, misy mendrika ve hafa? Nanontany fotsiny i David hoe: Misy olona ve? Ity fanontaniana ity dia fanehoana hatsaram-panahy. Avy amin'ny valintenin'i Ziba dia azonao lazaina: tsy azoko antoka fa manana toetra ambony izy. «Ary hoy ny mpanjaka taminy: Aiza izy? Ary hoy Ziba tamin'ny mpanjaka: Indreo, ao Lo-Dabar ao an-tranon'i Makira, zanakalahin'i Amiela, izy. (2 Sam 9,4). Midika ara-bakiteny ilay anarana, tsy misy kijana.
Ilay tonga lafatra, masina, marina, mahery indrindra, Andriamanitra hendry tsy manam-petra, Mpamorona an'izao rehetra izao, manenjika ahy ary manenjika anao. Miresaka momba ny fikarohana olona, ​​olona amin'ny dia ara-panahy izahay mba hahita zava-misy ara-panahy. Raha ny tena izy dia Andriamanitra no mitady. Hitantsika amin'ny Soratra Masina rehetra izany. Eo am-piandohan'ny Baiboly dia manomboka ny tantaran'i Adama sy Eva, izay nierenany tamin'Andriamanitra. Amin'ny hariva mangatsiatsiaka dia tonga Andriamanitra ary mitady an'i Adama sy Eva ary manontany hoe: Aiza ianao? Rehefa nanao ny hadisoana mahatsiravina tamin'ny famonoana Ejiptiana i Mosesy dia voatery natahotra ny ainy nandritra ny 40 taona izy ary nandositra tany an'efitra. Eo Andriamanitra dia mitady azy amin'ny endrika roimemy mirehitra ary mandamina fivoriana miaraka aminy. Ao amin'ny Testamenta Vaovao dia mahita an'i Jesosy mihaona amin'ny roa ambin'ny folo lahy izy ary mikapoka ny sorony ary miteny hoe: Te-hiaraka amiko ve ianao?
«Fa Izy no nifidianany antsika talohan'ny nahariana izao tontolo izao, mba ho masina sy tsy manan-tsiny isika eo alohany amin'ny fitiavana; efa notendreny mialoha ho tonga zanany isika amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy araka ny sitraky ny fony, hidera ny fahasoavany be voninahitra izay nomeny fahasoavana ho antsika ao amin'ilay Malala » (Efesiana 1,4: 6)
Ny fifandraisantsika amin'i Jesosy Kristy, ny famonjena, dia omen'Andriamanitra antsika. Andriamanitra no mifehy azy ary Andriamanitra no manomboka azy. Andriamanitra no namorona azy. Miverina amin'ny tantarantsika. Nandefa andian-dehilahy ho any Lo-Dabar eo amoron'ny tany tsy misy an'i Galaadra i David izao mba hitady an'i Mefi-Boscheth. Miaina mitokana sy tsy mitonona anarana izy ary tsy te-ho hita. Saingy hita izy. Napetrak'izy ireo tao anaty fiara i Mefi-Boscheth ary nentin'izy ireo niverina tany an-drenivohitra izy ireo. Ny Baiboly dia milaza amintsika kely na tsy misy momba ny fandehanan'ny kalesy. Fa azoko antoka fa azontsika sary an-tsaina daholo hoe hanao ahoana ny hipetraka eo amin'ny gorodon'ny fiara. Inona no fihetseham-po tsapan'i Mefi-Boscheth tamin'ity dia ity, tahotra, tahotra, tsy fahatokisana. Ny fiara mandeha eo alohan'ny lapa. Nentin'ireo miaramila izy ary napetrany tao afovoan'ny efitrano. Karazany tolona amin'ny tongony izy ary miditra i David.
Ilay fihaonana amin'ny fahasoavana
Ary nony tonga tao amin'i Mefiboseta, zanak'i Jonatana, zanak'i Saoly, dia niankohoka izy ka niankohoka teo anatrehany. Ary hoy i David: Mefi-Boscheth! Ary hoy izy: Inty aho ankizivavinao. Ary hoy Davida taminy: Aza matahotra; fa izaho hiantra anao noho ny amin'i Jonatana rainao, ary haveriko ho anao ny fananan'ny Saola rainao; fa eo amin'ny latabatro ihany no hihinananao isan'andro. Dia niankohoka izy ka nanao hoe: Zinona aho, mpanomponao, no ho lasa alika maty tahaka ahy? (2 Samoela 9,6: 8).
Fantany fa kilemaina izy. Tsy manan-javatra hatolotra an'i David izy. Fa izany no atao hoe fahasoavana. Ny toetra, ny toetran'Andriamanitra, dia ny fironana sy ny toetra manome zavatra tsara sy tsara ho an'ny olona tsy mendrika. Fa andao hanao ny marina. Tsy ity no tontolo iainan'ny ankamaroantsika. Miaina ao anatin'ny tontolo iray milaza isika fa: mitaky ny zoko aho ary manome ny olona izay mendrika azy ireo. Ny ankamaroan'ny mpanjaka dia mety ho namono mpandova seza fiandrianana. Rehefa niaritra ny ainy i David dia naneho famindram-po. Naneho famindram-po taminy izy tamin'ny fanehoany famindram-po.
Tiana mihoatra ny eritreretintsika isika
Ary ankehitriny, rehefa eken'Andriamanitra amin'ny finoana isika, dia mihavana amin'Andriamanitra. An'i Jesosy Kristy Tompontsika izany. Nosokafany ny lalana hahafahantsika matoky ary miaraka amin'izany ny fahazoana ny fahasoavan'Andriamanitra, izay nahazoantsika izao dingana tsara izao (Romana 5,1-2).
Toa an'i Mefi-Boscheth dia tsy manan-javatra hatolotra an'Andriamanitra afa-tsy ny fankasitrahana isika: «hidera ny fahasoavany be voninahitra izay nanomezany voninahitra antsika ao amin'ny Malala. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany, ny famelana ny helontsika, araka ny haren'ny fahasoavany » (Eph1,6-7).
Voavela ny heloky ny olona rehetra. Ka nasehon'Andriamanitra tamintsika ny haren'ny fahasoavany. Lehibe sy manan-karena tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra. Na mbola tsy naheno ilay teny ianao na nanda ny hino fa marina izany. Izany no fahamarinana satria tianao ianao ary efa nanaraka anao Andriamanitra. Amin'ny maha mpino antsika dia nanao fihaonana tamin'ny fahasoavana isika. Ny fiainantsika dia niova tamin'ny alàlan'ny fitiavan'i Jesosy ary nifankatia taminy isika. Tsy mendrika an'izany isika. Tsy mendrika izany izahay. Fa natolotry Kristy tamintsika ity fiainana fiainana mahafinaritra indrindra ity. Izay no maha hafa ny fiainantsika ankehitriny. Mety hifarana eto ihany ny tantaran'i Mefi-Boscheth, ary ho tantara mahafinaritra izany.
Toerana eo amin'ny solaitrabe
Tsy maintsy niaina sesitany nandritra ny roapolo taona ilay zazalahy kely. Niova tanteraka ny fiainany. Hoy i David tamin'i Mefi-Boscheth: "Mihinana eo amin'ny latabatro toy ny iray amin'ny zanakalahin'ny mpanjaka" (2 Samoela 9,11).
Mefi-Boscheth dia ao anatin'ny fianakaviana ankehitriny. Tiako ny fiafaran'ny tantara satria toa nametraka lahatsoratra kely ny mpanoratra tamin'ny faran'ny tantara. Miresaka momba ny fomba niainan'i Mefi-Boscheth an'io fahasoavana io isika ary ankehitriny dia tokony hiara-miaina amin'ny mpanjaka ary mahazo mahazo misakafo eo amin'ny latabatry ny mpanjaka.
Alao an-tsaina izany toe-javatra izany taona maro taty aoriana. Naneno ny lakolosy tao an-dapan'ny mpanjaka ary tonga teo amin'ny latabatra lehibe i David ary nipetraka. Fotoana fohy taorian'izay dia nipetraka teo amin'ny ilany ankavanan'i Amnona ilay fetsy sy marani-tsaina. Avy eo dia niseho i Tamar, tovovavy tsara tarehy sy sariaka ary nipetraka teo akaikin'i Amnona. Etsy an-danin'izany, i Solomona, izay manaitaitra ny saina, mamiratra, very hevitra dia nipoitra tsimoramora avy tamin'ny fianarany. Nipetraka i Absaloma, volo lava sy lava ny soroka. Ny harivan'izay dia nasaina hisakafo i Joaba, ilay mpiady mahery sy komandin'ny miaramila. Na izany aza, seza iray no mbola banga ary miandry ny rehetra. Reko ny tongotr'ireo mihetsiketsika sy ny feon'ireo tehina. I Mefi-Boscheth no mandeha miadana amin'ny latabatra. Midoboka ao amin'ny sezany izy, manarona ny tongony ny lambam-pandriana. Mihevitra ve ianao Mefi-Boscheth fa atao hoe fahasoavana?
Fantatrao, izany dia mamaritra ny ho avy rehefa hiangona any an-danitra manodidina ny latabatra fanasana lehibe ny fianakavian'Andriamanitra iray manontolo. Amin'ity andro ity, ny lamban-databatra fahasoavan'Andriamanitra dia manarona ny filantsika rehetra. Hitanareo, amin'ny alàlan'ny fahasoavana no fomba ahatongavantsika ao amin'ny fianakaviana. Ny fahasoavany dia fanomezana isan'andro.
"Tahaka ny efa nanekenao an'i Kristy Jesosy Tompo izao, dia mitoera ao aminy koa, miorim-paka sy miorina ao aminy ary miorena tsara amin'ny finoana, araka ny nampianarana anao sy feno fankasitrahana" (Kolosiana 2,6: 7). Nandray an'i Jesosy tamin'ny fahasoavana izy ireo. Ankehitriny ao amin'ny fianakaviana ianao dia ao anaty fahasoavana no ao. Ny sasany amintsika dia mieritreritra fa raha vao lasa Kristiana amin'ny fahasoavana isika dia tsy maintsy miasa mafy kokoa ary manome an'Andriamanitra ny rariny mba hahazoana antoka fa mbola tia sy tia antsika izy. Eny, tsy misy zavatra mety ho lavitra ny fahamarinana.
Iraka vaovao amin'ny fiainana
Tsy nomen'Andriamanitra anao fotsiny i Jesosy mba hahafahanao miditra amin'ny ankohonany, fa omeny anao izay rehetra ilainao ankehitriny hanananao fiainana feno fahasoavana raha vao ao amin'ny fianakaviana ianao. «Inona no tiana holazaina ankehitriny? Raha momba antsika Andriamanitra, iza no hahatohitra antsika? Ary iza no tsy niantra ny zanany lahy, fa natolony hamonjy antsika rehetra izy, ka tsy tokony homeny antsika miaraka aminy ny zavatra rehetra. " (Romana 8,31-32).
Ahoana ny fihetsikao rehefa fantatrao izany? Inona no valinteninao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra? Inona no azonao atao hanampiana? Ny apostoly Paoly dia niresaka momba ny zavatra niainany manokana: “Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no naha-izaho ahy. Ary ny fahasoavany tato amiko dia tsy foana tsy akory, fa efa niasa betsaka kokoa noho izy rehetra aho; fa tsy izaho, fa ny fahasoavan'Andriamanitra amiko » (1 Korintiana 15,10).
Isika izay mahalala ny Tompo ve miaina fiainana maneho taratra ny fahasoavana? Inona avy ireo toetra mampiavaka fa miaina fiainana mahafinaritra aho? I Paul dia manome ny valin'ity fanontaniana ity: "Fa tsy heveriko ho tononina ny fiainako raha toa ka tsy mahafeno ny diako fotsiny aho ary manatanteraka ilay asa noraisiko avy tamin'i Jesosy Tompo mba hijoro ho vavolombelona momba ny filazantsaran'ny fahasoavan'Andriamanitra" (Asan’ny Apostoly 20,24). Iraka amin'ny fiainana izany.
Toa an'i Mefi Boscheth, ianao sy izaho dia tapaka ara-panahy sy maty ara-panahy. Fa tahaka azy dia narahina isika satria tia antsika ny Mpanjakan'izao rehetra izao ary tiany ho ao amin'ny fianakaviany isika. Tiany hizara ny vaovao tsaran'ny fahasoavany amin'ny fiainantsika isika.